Wararka Maanta: Khamiis, May 16, 2019-Australia oo ka mamnuucday wadista Taksiga haweeney Soomaali ah oo inuu hago waydiisatay nin indho la'
Haweenaydan oo 69 jir ah ayaa ka shaqeynaysey magaalada Melbourne , waxaa lagu magacaaba Xaawo Cad ayaa iminka laga mamnuucay inay gebi ahaanba gaari kexeeyso ,kaddib markii lagu qabtay dembiyo ay ku jiraan xawaara dhaaf, baasidda samaafare shidaya nalka cas iyo iyadoo gaariga ku wadda carruur aan suunka u xirnayn.
Xaawo, ayaa horay siddeed jeer arrimahan oo qura loogu maxkamadeeyay,iyadoo lagu helay 27 dembi oo dhanka gaari wadista ah, islama markaana ay saddex jeer tillaabo ka qaadeen guddiga anshax marinta jidadka.
Waxyaabaha kale ee lagu haysto waxaa ka mid ah dhowr mar oo ay rakaabku kasoo cowdeen, midkood wuxuu xitaa ahaa nin indhoole ah oo ay waydiisatey inuu jihooyinka u tilmaamo iyadoo diiddey inay adeegsato GPS ama ay kaash aqbasho.
Illaa 19 jeer ayaa la sheegay in la qabtay iyadoo xawaareynaysa, shan jeerna waxay ka gudubtey nal cas, waxaa inta dheer mararka qaar inay diidday inay seed bixiso ama daarato nalalka hore.
Haweenaydan waxaa ay ahayd qofka kaliya ee dumarka ah oo ka soo jeedda Soomaaliya oo Taksi ku ka xeysa muddo dheer magaalada Melbourne ee dalka Australia.
5/16/2019 10:51 AM EST